Dowlada Kenya oo bedeshay dhammaan qareenadii u doodayay dacwada badda kentay kuwo cusub oo ajaabiib ah. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowlada Kenya oo bedeshay dhammaan qareenadii u doodayay dacwada badda kentay kuwo...
Dowlada Kenya oo bedeshay dhammaan qareenadii u doodayay dacwada badda kentay kuwo cusub oo ajaabiib ah.
Xili bisha soo socoto lagu wado in la iskugu yimaado Maxkamada ICJ ee Caalamka ayaa waxaa soo baxaya Warar sheegaya in Kenya ay badashay dhamaan Qareenadii u doodayay Bada.
Dowladda Kenya oo dhowaan ku guul darreysatay dalabkeedii ahaa in dib loogu dhigo dacwadda badda ee kala dhexeysa Soomaaliya ayaa haatan bedashay dhammaan qareenadeedii dacwadda badda ee taal maxakamadda ICJ
Xukuumadda Nairobi ayaa soo xulatay illaa siddeed qareen oo cusub, kuwaas oo 7 ka mid ah ay yihiin Ajaaniib ah, halka xubinta 8-aad ay tahay haweeney Kenyaan ah.
Dhammaan qareenadan ayaa ah kuwa caalami ah oo leh qibrad sare, islamarkaana kasoo shaqeeyey xarumo kala duwan & jaamacado, waxaana hoggaaminaya nin lagu magacaabo Prof Sean Murphy oo ka tirsan George Washington School of Law.
Sidoo kale waxaa wehelinaya qareen kale oo la yiraahod Tullion Treves oo sidoo kale ahaa garsoore hore oo ka tirsanaa maxkamadda caalamiga ah ee sharciga badaha.
Justice Treves sidoo kale wuxuu ka soo muuqday Maxkamada Caalamiga ah ee Cadaalada (ICJ) kiis la mid ah kii Peru iyo Chile.
Previous articleFeysal Cali Waraabe “ Dadka Muqdisho dagan iyagaa is dhigay meesha ay joogaan maanta, cadawna gacanta u geliyeen taladooda Muqaal
Next articleHoggaamiyaha Xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shegay in aan lala kulmin Madaxweyneyaasha Galmudug iyo Hirshabeelle
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden: Wax la aqbali karo maaha in markhaati laga noqdo 30 kaddib dimuquraadiyaddii Soomaaliya oo loo beddelayo kelitalis-nimo.
Booliiska Garissa oo xiray dad telefoonno been abuur ah ka iibinayay...
Maraykanka “Qaabka aan u dajinay qorshaheena dagaal waxay ...
Ethiopia oo safiir cusub u soo magacowday Soomaaliya oo...